Myanmar Defence Weapons: တပ်မတော်(ရေ)၏ ဓါး (၄)စင်း၊ ဒိုင်း (၂)ခု နှင့် ချပ်ဝတ်တန်ဆာ (၁)စုံ
Posted by MM at 5:08 PM
ရန်ပုံခွင်း သွေးသောက် April 7, 2013 at 7:36 PM
ကြားရတာ မင်္ဂလာရှိလိုက်ပါဘိတော့တယ် ........
Myo Thant April 10, 2013 at 2:54 AM
zinnwe phyo April 22, 2013 at 7:20 PM
စစ်ရေယာဉ်တွေမှာဒုံးများများရှိစေချင် တယ်ဒုံးတွေကိုဝှက်ထားရင် ပိုကောင်းတယ်
zinnwe phyo April 22, 2013 at 7:59 PM
တပ်မ တော်အင် အားရှိမှတိုင်းပြည်အင် အားရှိမှာ ကာကွယ်ရေးရ ငွေကသူများနိုင် ငံနဲ့ ယှဉ်ရင် နည်းနေတယ် ရင် ထဲရှိတာရေးလိုက်တာ
Ne Linn Aung April 25, 2013 at 6:57 AM
To be readiness for war, trainning and maintenence are very important. Yes,need money. Many civillian do not know what threats our country is facing. PLEASE OPEN YOUR EYES.
Aung Nyein Khant April 27, 2013 at 6:27 AM
ရေငုပ်သင်္ဘော တွေလည်း ဆောက်ကြပါဦး
ZOMBIES May 1, 2013 at 3:52 AM
သင်္ဘောကြီးတာ ငယ်တာနဲ့ မဆိုင်ဘူး အဓိကက ရေဒါ နဲ့ ဒုံးကျည်တွေသာ ရန်သူသင်္ဘောထက်သာရင် ရန်သူသင်္ဘောကြီးလည်းရေအောက်ပဲ.....ဒါကြောင့်အခုလက်ရှိ ဖရီးဂိတ်သင်္ဘောတွေမှာ ဒီထက်အဆင်မြင့်တဲ့ဒုံးတွေတပ်ထားရင်အကောင်းဆိုးပေါ့....အခုဆိုရင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ရေတပ်မှာ တရုတ်လုပ် ဖရီးဂိတ် နှစ်စီးထပ်အင်အားဖြည့်ထားပြီးပြီလို့သိရပါတယ်......အဲဒီဖရီးဂိတ်တွေက မြန်မာ တရုတ်လုပ် ဖရီးဂိတ်ထက် version ပိုမြင့်တယ်လို့သိရပါတယ်....ဒါကြောင့် မော်မကြည့်ရဲလောက်အောင် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ ရေတပ် ကို ဒီထက်ပိုပို ခေတ်မှီအောင်ပြင်ဆင်ထားရပါမယ်.....
koko aung March 24, 2014 at 6:39 AM
ပိုက်ဆံလိုရင် ကာကွယ်ရေး အတွကိ ဆိုပြီး
အခွန် တိုးကောက် ပေးမယ်